Football Khabar » १६औं स्थानको एइबारसँग एथ्लेटिको मड्रिडको नमिठो हार !
१६औं स्थानको एइबारसँग एथ्लेटिको मड्रिडको नमिठो हार !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा उपाधि होडमा रहेको एथ्लेटिको मड्रिडले लज्जास्पद हार भोगेको छ । गत राति भएको लिगको २०औं खेलमा एथ्लेटिकोलाई एइबारले आफ्नो घरमा २–० को हार चखायो ।
अवे मैदानमा खेलमा पकड राखे पनि एथ्लेटिकोले गोल गर्न सकेन । गोलका अवसर कम पाए पनि एइबारले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफ्नो घरमा स्पष्ट जित निकाल्यो । आफ्नो घरमा एइबारले खेलको १०औं मिनेटमा इस्टेबान बुर्गोसको गोलबाट अग्रता लिएको थियो ।
गोल खाएपछि पछि परेको एथ्लेटिकोले बराबरी गोलको खोजीमा ठूलै संघर्ष गरे पनि सकेन । ऊ त्यत्तिबेला स्तब्ध बन्यो, जतिबेला ९०औं मिनेटमा दोस्रो गोल खायो । सो गोल इडु एक्स्पोसिटोले गरेका थिए । सो गोलपछि एइबारले खेल २–० ले जित्यो ।
अब यो जितसँगै एइबार १६ खेलबाट २२ अंक बनाएर लिगको १६औं स्थानमा रहेको छ । पराजित एथ्लेटिको ३५ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति ५ माघ २०७६, आईतवार ०९:२०